WARBIXIN MUHIIM AH: Warar ku saabsan doorashada Puntland ee sannadka 2019-ka, Mucaaradka oo yareeyey hadaladooda & Xaaladda Tukaraq oo ku noqotay Arrin kale? – Puntlandtimes
WARBIXIN MUHIIM AH: Warar ku saabsan doorashada Puntland ee sannadka 2019-ka, Mucaaradka oo yareeyey hadaladooda & Xaaladda Tukaraq oo ku noqotay Arrin kale?
May 7, 2018 W LAASCAANO
GAROOWE(P-TIMES)- Puntland ayaa u diyaar garoobaysa doorashada baarlamaanka & tan Madaxweyne-nimada oo dhici doonta 8 January 2019, oo ay naga xigaan bilo kooban, waxaana horey u dhici jirtay in waqtigan oo kale ay gudaha dalka ka bilowdaan doodo waa weyn iyo Loolanka ay wadi lahaayeen musharaxiinta u taagan Madaxweyne-nimada ee maamulka Puntland.
Ma jirro loolan la mid ah kii dhacay sannadkii 2014-kii, kaas oo waqtigaas ku kalifay maamulkii xilka hayey in ay isticmaalaan awoodo dheeraad ah oo ay ku xakameynayaan musharaxiintii hardanka adag kula jiirtay, waxaana uu loolankaas bilowday sannadkii u dambeeyey oo aan wali bilaha hore la gaarin.
Xukuumada Puntland ee hadda xilka haysa ayaa u muuqata mid ka dabaalatay in waqti hore ay ku bilowdaan xamaasad siyaasadeed, waxaana mandiqada ka muuqata in aan wali si dhameystiran musharaxiinta lasaadaalinayo ay fagaaraha yimaadaan.
Falanqeeyaasha sidda dhaw ula socda arrimaha Puntland ayaa rumeysan in fursado siyaasadeed iyo kuwa waqti keenayba ay wajahday Xukuumada Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, gaar ahaana dhacdada Tukaraq ka bilaabat bilowgii sannadkan ayaa ah fursad aan wali dhinacna u dhicin, waxaana saadaaliyashu ay il gaar ah ku eegayaan waxa ka socda deegaankaas.
Musharaxiinta qaarkood waxay wadnaha farta uga hayaan dagaal ka dhaca Tukaraq xiliga xagaaga ee nagu soo aadan, taas oo ay u arkaan fursad siyaasadeed oo ay Xukuumadda hadda talada haysa u aragto mid ay ku gaari karto damaceeda ku aadan soo laabasho.
Laakiin Madaxweyne Gaas ayaa si dad-ban u sheegay in uu dalku ku jiro marxalad difaac, wuxuuna sheegay in uu isagu ku mashquulsan yahay Horumarinta & Difaaca xaduudaha Puntland, taas oo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegeen in ay iska cadahay mawqifka dawladda ee ah in dagaal ay dib ugu qabsato gobalka Sool.
Madaxweynaha Puntland ee hadda xilka haya ayaa ka sheegay dhawaan magaalooyinka Garoowe & Qardho in ay dhacayso doorashadu waqtigeda, wuxuuna sheegay in ay xooga saarayaan sidii doorashadaas u noqon lahayd mid ka fiican tii isaga lagu doortay 2014-kii oo hal cod lagu kala guuleystay.
Kurbada Tukaraq ee ragga loolanka ugu jira Madaxtinimada Puntland ayaa ah in haddii dagaal dhaco ay fursad u tahay Madaxweyne Gaas & kooxdiisa, waxaana la saadalinayaa in dagaal dhaca bishan iyo bilaha nagu soo aadanba ay keeni karto waqtiga dagaalkaas oo daba dheeraada, taas oo ay welwel weyn ka qabaan dhinacyada mucaaradku.
Saaxiibada ugu dhaw ee Madaxtooyadu waxay rumeysan yihiin in haddii dagaal dhaco, Puntland-na ay qabsato Laascaanood oo gacanteeda ka baxday 11 sano kahor, ay heli doonaan fursado siyaasadeed iyo in ay markale kusoo laabtaan Hogaaminta Puntland, taas oo ah fursad ay dhinacyada oo dhan sheeda ka eegayaan.
Mucaaradka ayaa hadda ka gaabsanaya in ay ka hadlaan arrimaha gudaha ee Puntland, waxaana madasha Puntland FOCUS Group ay dhawaan baahisay in ay ku amaanayso Madaxweyne Gaas in uu ka dhabeeyo balanta ah in doorashadu ay ku dhici doonto sidii ay horey ugu dhici jirtay, waqtiguna uu noqon doono xiligeedii.
Ilaa hadda musharaxiinta Madaxweyne-nimada Puntland u taagan ayaa sii badanaya, waxaana xubnaha ugu cad-cad ilaa hadda la saadaalinayo kamid ah, xubno horey xilal uga soo qabtay Puntland iyo Dawladda Faderaalka, waxaana iska cad in uu noqon doono hardan ay adag tahay in saadaalin hordhac ah laga sameeyo waqti ay naga xigaan bilo kooban.
Cabdiraxmaan Faroole” Waddo Qaldan Ayuu Ku Socdaa Dhameystirka Dastuiurka Dalka”.
DEG DEG+AKHRISO: Xubnaha Aqalka Sare Puntland u qaabilsan oo ku dhawaaqay in Kacdoon Siyaasi ah ka taagan yahay Muqdisho.
XOG: Xubnaha Puntland u matalaya Aqalka Sare ee Soomaaliya oo si deg deg ah ugu laabtay Garoowe, kuna dhawaaqay.
DAAWO MUUQAAL: Miyuu jira Mooshin ka dhan ah Xukuumadda RW Kheyre oo loo geeyey guddoonka baarlamaanka Soomaaliya?
DAAWO: Kenya & Itoobiya oo ka wada hadlay Dekedaha Soomaaliya, sidii loola wareegi lahaa.
Ingiriiska Oo Tababar Siinaya Ciidamada Maamulka Somaliland